Dab xoogan oo qabsaday Dhismaha Hotel weyn oo kuyaala Dubai +Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dab xoogan oo qabsaday Dhismaha Hotel weyn oo kuyaala Dubai +Sawiro
Dab xoogan ayaa goordhaw qabsaday dhismaha Hotel weyn oo kuyaaa Magaalada Dubai, Hotelkan wali gubanaya ayaa ku yaala bartamaha Magaalada gaar ahaan goob aad ugu dhaw dhismaha ugu dheer adduunka ee Burj Khaliifa.
Dabkan ayaa ka kacay dabaqa 20-aad ee dhismaha Hotelka weyn ee The Address, waxaa la arkayaa holac iyo qiiq kasoo baxaya qeybo ban oo kamid ah dhismaha Hotelka, waxaana halkaasi ku sugan gaadiidka dab damiska oo aad u badan kuna dadaalaya in ay dabka damiyaan.
Dhismaha hotelka uu dabku ka kacay ayaa dhirirkiisu yahay 300 oo mitir, waxa uuna hotelkan kamid ahaa kuwa ugu casrisan uguna weyn dalka Imaaraadka Carabta, wali lama soo warin wax qasaaro nafeed ah oo ka dhashay dabkaasi ka kacay Hotelka.
Dabkan ayaa kacay wax yar un ka hor xaflad weyn oo ka dhici laheyd dhismaha Aduunka ugu dheer ee Burj Khaliifa, halkaas oo lagu ridi lahaa baaruudda rashka oo lagu soo dhaweynayo curashada sanadka cusub ee 2016-ka.
Sida ay ku waramayaan Warbaahinta dabka ka kacay Hotelka The Address ayaa la sheegay in uu qabsaday inta badan dhismaha hotelka oo ka kooban 60-dabaq, hotelka ayaana lahaa qeybo jiif ay dadku degaan.